MH17 waxay ku dhisantahay muuqaal qurux badan oo qurux badan oo "ribbon"
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 31 August 2016	• 12 Comments
Vijfhuizen waxaa dhowaan noqon doona muxujiin lagu xusayo dhibbanayaasha musiibada MH17. Waa waxqabad ka mid ah Munaasabadda Qaranka MH17 Foundation. Waa arrin aad u cakiran waa calaamad muujinaysa muqaalka. Waxaannu u doorannay isha oo dhan oo isha ku jirta caleen cagaaran (saliideed), sida lagu arki karo farshaxanka farshaxanka ee calaamadda hoose. Intaas waxaa dheer, [...]
Samsung, Google, Cybernetics iyo isku dheelitirka jirka ee u dhexeeya nin iyo mashiinka
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 30 August 2016	• 1 Comment
Cybernetics waa erey ka timid Gariiga Giriigga (kybernētēs, saaxiibka) iyo waa sayniska oo ka shaqeeya xakameynta hababka bayoolojiga iyo farsamooyinka by feedback. Cyborg (oo ah aaladda Ingiriisiga ah ee cybernetic ama cybernetic organism) waa isku dhafka jirka ee man iyo mashiinka. Shuruudahaan waa kuwo xiiso leh oo meel [...]
David Bowie wuxuu geeriyaa maalmo 2 ka dib dhalashadii 69e
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 11 January 2016	• 18 Comments
Farriinta ayaa u muuqata in gabaygan cusub ee Aleister Crowley David Bowie uu ku geeriyooday da'da 69 wax yar ka dib markii uu soo saaray albaabkiisa cusub 'Blackstar'. Dhimashada Bowie waxaa laga yaabaa inay tahay wax laga naxo bulshada. Waxa uu ahaa mid aad loo ixtiraamo oo si wacan loo yaqaan, haddii aan weyneyn, muyuusig. Taasi waa ugu yaraan [...]
Baro macnaha dhabta ah ee xisbiyada kirismaska
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 10 December 2015	• 6 Comments
Si aad u ogaato macnaha dhabta ah ee kirismaska, waa waxoogaa qashin ah taariikhda. Waxay ka bilaabantaa qulqul aan yarayn: Dhaqanka jaahiliga ah ee Nordic, 12 ayaa la gubay maalmo badan oo ah geed weyn oo ah xayawaanno iyo shakhsiyaad lagu gowracay sharafnimada Yule. Geedka geedka wuxuu calaamad u yahay sinjiyada labka ah. [...]
911 miyuu ahaa 'Dambiyada qarniga' oo uu ku dhawaaqay Supertramp in 1979?
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 19 Oktoobar 2015	• 33 Comments
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan la joogay saaxiib saxa ah kaas oo si weyn u soo jiitay kooxda Supertramp, laga bilaabo sanadka 70. Markaa muusigga ayaa istaagay oo daacad ahaa, waan jeclaa taas. Waagii hore waxaan helay muusikada ku qasban, muusikada iyo quruxda. Waxa uu i tusay daboolka album 'Breakfast Breakfast in' [...]
Islaamku waxa kale oo ku jira qaybta calaamada Saturn 2
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 30 September 2015	• 14 Comments
Shalay waxaan soo bandhigay maqaal aan ku arkay aragti aan ku leeyahay joogitaanka suurtagalka ah ee calaamadinta Saturn ee Islaamka. Halkan waxa diiradda la saaraa inta badan Kaaba ee Mecca iyo marka la barbardhigo waqooyiga waqooyiga ee Saturn. Tani maahan dood dhab ah oo dad badan ah. Xaqiiqdii ma ahan qorshahayga [...]
Islaamku waxa kale oo ku jira calaamadda Saturn
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 29 September 2015	• 45 Comments
Sababtoo ah waxaan heystaa taageerayaal badan oo Muslim ah oo Facebook ah, waxaan si joogto ah u helayaa su'aasha ah sida aan u sheegan karo in diinta ay tahay mid ka tarjumaysa dhaqanka Saturn. Si aan u bilaabo, waxaan rabaa in aan caddeeyo inaan u ixtiraamo dadka si dhab ah u aaminsan. Waxay inta badan aad ugu qanacsan yihiin noloshooda waxayna leeyihiin [...]
Eagles song Hotel California Shucuurta bilaabista ritual
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 21 September 2015	• 10 Comments
Qof walba oo ku ciyaaraya guitar wuxuu heestaa heesta ugu yaraan 1x noloshiisa, laakiin malaha badanaa badanaa. Dabcan sidoo kale waa giniga quruxda badan quruxda badan, qorraxda heesaha waa mid u gaar ah waqtigiisa. Qoraalkan ayaa had iyo jeer ahaa mid aan caddayn, laakiin taasi badanaa waa dhacdo leh muusikada laga soo qaaday [...]
CERN, Shiva, Vedas, Saturn iyo burburkii la qorsheeyey ee bani'aadamnimada
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 17 August 2015	• 6 Comments
Si aad u sii wado aqrinta maqaalkan, waxaad xubin ka noqon kartaa adigoo gujinaya badhanka 'taageeradaada'. Tani waxay ku siinaysaa inaad gasho inta ka hartay maqaalkan. Dariiqaani waa muhiim maxaa yeelay waa inaad buugga akhridaa marka hore. Waxaad horay xubin uga ahayd laga bilaabo € 2 / bishii sidaa daraadeedna igu taageerta inaan dhex maro […]
Calaamadaha hawada laga bilaabo wakhtiyadii hore waxay sharxi jireen muusiga, 'indhaha oo dhan' iyo wax ka badan
Filed in SYMBOLIC	by Martin Vrijland	on 7 April 2015	• 1 Comment
Miyaad ogtahay in miyuu cilmi-baaristu arkeen mammoths-ka la qaboojiyey, qaar ka mid ah kuwan oo weli cunto ku lahaa afka? Waxaan rabaa in aan kaala hadlo taas, sababtoo ah waxay muujinaysaa qabow degdeg ah, sidaa darteed hadhaaga si fiican ayaa loo ilaaliyey. Mamaulka ayaa ku noolaa aagagga waqooyiga, halkaas oo sida muuqata aysan jirin wax cufan oo weyn, sida aan hadda [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.334.455
gt1987 op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Kabaha xarkaha op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
Martin Vrijland op Qaansoroobaaddu waxay meteleysaa diin soo jiidasho leh halka taageerayaashu ay u maleynayaan inay u dagaallamayaan 'kala duwanaansho iyo wax wada qabsi'
2 camera op Qaansoroobaaddu waxay meteleysaa diin soo jiidasho leh halka taageerayaashu ay u maleynayaan inay u dagaallamayaan 'kala duwanaansho iyo wax wada qabsi'